Dhinaca jacaylka ugu badan ee saadaasha hawada. Saadaasha Shabakadda
Vyacheslav Korotki wuxuu u baxayaa dayaxa oo buuxa si uu xaabada uga soo xareeyo laydhka.
Ka sakow moodooyinka iyo saadaasha, waxaa jira qayb ka mid ah saadaasha hawada oo jillaabaysa. Qaybtaas hubaal waan wada aragnay in muddo ah, maxaa yeelay waxay si fudud ugu saabsan tahay fiirinta cirka. Tilmaamahan, in yar oo yar ayaan ku ogaan karnaa inta ay maalintaas inagu sugayso, oo waxaan qaadan karnaa tallaabooyinka ku habboon si aan ugu raaxeysan karno.
Si kastaba ha noqotee, si loo ogaado dhammaan waxyaalaha qarsoon ee dunidan cajiibka ahi qarinayso, waxaa jira nin magaciisu yahay Vyacheslav Korotki oo go’aansaday inuu u safro wax kayar ama ka yar waqooyiga: halkaasoo barafka arctic lagu arko dhinaca ugu jacaylka badan ee cimilada marar badan. Sababtoo ah isagu ma aha oo kaliya khabiir kasta oo saadaasha hawada.
Kani waa raadiyaha uu Korotki adeegsado si uu xogtiisa ugu gudbiyo xarun cimilo kale, oo uu markaa u diro Moscow. Baahinta ayaa laga yaabaa inay dib u dhacdo dhowr maalmood.
Sida inuu isku dayayo inuu ka cararo magaalooyinka, Korotki waa nin jecel kelinimada. Lixdan iyo seddex, wuxuu ku noolaa maraakiibta Ruushka, iyo hadda xero Arctic Ruush ah oo la yiraahdo Khodovarikha., halkaasoo ay u dirtay gobolka si loo cabiro heerkulka, barafka, dabaylaha, ... marka la soo koobo, si ay shaqadeeda u qabsato. Magaalada ugu dhaw waxay saacad u jirtaa helikabtar, taas oo umuuqata inuusan jecleyn haba yaraatee: markuu booqdo xaaskiisa oo degan Arkhangelsk, ma heli karo isfaham dhexmara taraafikada iyo buuqa.
Korotki wuxuu aadaa badda Barents si loo cabiro heerka biyaha.
Sawir qaade Evgenia Arbugaeva, oo ku barbaartay magaalada Arctic ee Tiksi, ayaa dooneysay inay ku dhowaato nolosha ninkan. Wuxuu la qaatay laba waqti oo dhaadheer isaga, wixii uu daahfurayna waxay ahaayeen wax layaab leh: Korotki ma ahayn cidlo keli ah oo u qaxay woqooyiga riwaayad weyn darteed, laakiin maxaa yeelay ma uusan dareemayn inuu gurigiisa ku dhex joogo magaalooyinka casriga ah. Xitaa waxay tiri waxay la mid ahayd dabaysha ama cimilada lafteeda. Sawirada aad ku arkeyso qodobkaan waxaa qaaday haweeneydan.
Korotki wuxuu ku nool yahay kana shaqeeyaa guri alwaax ka sameysan oo ku yaal xaafadda Arctic Arctic ee Khodovarikha.
Adiguna, ma awoodi doontaa inaad u aado dhinaca kale ee meeraha xiisahaaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Dhinaca jacaylka ugu badan ee saadaasha hawada